Yintoni Indlela ikuncede Of Travel EYurophu? | Gcina A Isitimela
ekhaya > Travel Europe > Yintoni Indlela ikuncede Of Travel EYurophu?
(Wagqibela ukuhlaziywa nge-: 18/02/2020)
Abantu Into yokuqala bacinga xa uyazibuza Yintoni indlela ikhawulezayo zehambo eYurophu uhamba. Kodwa abavumelani! Nangona flying ngqo namendu, akukho nto ingacota kunendlela moya ukunciphisa ixesha lokuhamba okunene ugcine. Igcina kwakhona up sasibiza kakhulu wakuba kuxhomekeke endilithathaya ukuya moya i drive, kakhulu! Musa bathenwe thina uqale kwi kwendlela zixinene, ezinjengeetheminali ongu, imigca zingenakuphela ukuba ungene idlule zokhuseleko, yaye Impahla ibango ukulibaziseka ekufikeni bonke dibanisa i!
Ndicinga ukuba singakwazi sonke siyavumelana ukuba uhambo ibhasi i no-hayi! Ingakumbi xa ukuyithelekisa kwi intuthuzelo ufika kunye koololiwe. Uyaqiniseka kodwa malunga Yintoni na indlela ikhawulezayo zehambo e Yurophu kodwa? Funda ku!
Yintoni indlela ikhawulezayo yokuhamba e Brussels:
Eyona ndlela ibhetele zakuhamba Brussels i ngololiwe. Amatikiti kungenziwa ngohlelo Gcina A Train kwimizuzu ngaphandle kweefizi efihliweyo. Brussels yindawo enika umdla kunye izakhiwo emangalisa kunye nembali umdla ezipakishwe ezitalatweni alleyway.
Brussels uye into wonke umntu unika ezityiwa yaseYurophu ezifana ubugcisa bokwakha kunye ngaphezulu iindawo ezinika umdla zotyelelo ezingaqhelekanga. Musa ukuya eBrussels ukuba ngaba ukutya njengoko obugqithiseleyo, iimbaza, yaye ibhiya uzothatha ukuba badlale. Iqela elingcono malunga ne Brussels kukuba Kwakhona super lula ngololiwe kwaye ungakwazi kutyelela ezinye izixeko ngaphakathi eYurophu lula yaye ngokukhawuleza. Siye wahlanganisa kuwe 😉
Ukusuka eBrussels ukuya eParis
Uhambo evela EBrussels ku Paris sinokuzaliswa ngololiwe nje ngaphantsi 1:30 h. emke oololiwe rhoqo ngqo ukusuka zifika Brussels e Paris’ Gare du Nord imini yonke. Iinqwelo-moya ukusuka eBrussels ukuya eParis’ Charles de Gaulle Airport ukuthatha phezu 5 iiyure xa amaxesha ukulinda-moya zithathelwa ingqalelo.
Flight Time – 5:30h
Qeqesha Ukusuka eBrussels ku Paris Time – 1:22 h
Time Kusindisa: 4:08 h
Ukusuka eBrussels ukuya eLondon
Uhambo evela EBrussels eLondon sinokuzaliswa nje phezu 2 iiyure. Indlela fastest of izithuthi into ehamba ngololiwe, ne rhoqo oololiwe ngqo Eurostar kokufika kwisikhululo St Pancras London namhlanje kulo mhla. Iinqwelo-moya ukusuka eBrussels ukuya eLondon Heathrow Airport ukuthatha phezu 5 iiyure xa amaxesha ukulinda-moya kuthathwa.
Qeqesha Ukusuka eBrussels ukuya eLondon Time – 2:18 h
Flight Time – 5:36 h
Time Kusindisa: 3:18 h
Ukusuka eBrussels ku Amsterdam
Ukuhamba usuka EBrussels ku Amsterdam kuthatha nje phantsi 2 iiyure ngololiwe. oololiwe rhoqo ngqo sifike Station Central Amsterdam kuyo yonke imini. Iinqwelo-moya ukusuka eBrussels ukuya Schiphol Amsterdam xa Airport Thatha indawo 5 iiyure xa amaxesha ukulinda-moya zithathelwa ingqalelo.
Qeqesha Ukusuka eBrussels ku Amsterdam Time – 1:50 h
Flight Time – 5:05 h
Time Kusindisa: 3:15 h
Ukusuka eBrussels ukuya Lyon
Uhambo olusuka eBrussels ukuya Lyon kuthatha malunga 3:30 h. Indlela fastest lwezithuthi ohamba ngololiwe, kunye koololiwe rhoqo ngqo ukufika e Lyon imini yonke. Iinqwelo-moya ukusuka eBrussels ukuya Lyon uthathe nje phantsi 6 iiyure xa sendleleni moya namaxesha alinde zibandakanyiwe.
Qeqesha Ukusuka eBrussels ku Lyon Time – 3:29 h
Flight Time – 5:50 h
Time Kusindisa: 2:21 h
Ukusuka eBrussels ukuya eFrankfurt
Kuthatha nje phezu 3 iiyure ukuba ahambe ngetreyini, ukusuka eBrussels ukuya eFrankfurt. oololiwe ngqo bafika e Frankfurt rhoqo imini yonke. Ngokumataniswa, ezisuka eBrussels ukuya Frankfurt Thatha indawo 5 iiyure xa ixesha sokuhambisa moya kuthathelwa ingqalelo.
Qeqesha Ukusuka eBrussels ku eFrankfurt Time – 3:05 h
Flight Time -5:15 h
Time Kusindisa: 2:10 h
Yintoni indlela ikhawulezayo yokuhamba xa France:
Ngubani na LOVE France? Siye ebhalwe blog ezingenakubalwa ndawo ilungileyo France. ukusuka tips for ehamba ngololiwe ukusuka eParis Nice to Where you can kufumana fries best isisiFrentshi France okanye zokudlela Michelin Star e France xa ukhetha. Ngokomthetho, nawe gonna ufuna ukufumana apho ngokukhawuleza kangangoko kunokwenzeka! Eyona ndlela ilula apho? Ngololiwe Yebo!
Qeqesha Iindawo ezinika umdla eFransi yeyona ndlela isebenzayo yokuya eParis ukuya kweminye imizi e France. Travel from Paris to the south of France–albeit a bit pricey–is best done by train; moya yaye baqeqeshe amaxabiso kuvame ufana, kodwa umdla Uloliwe kungaphantsi kakhulu kuba inkinga.
Nangona ehamba ngebhasi okanye ndikhwele-isabelo ayibizi, isixa iiyure bekuya kuthabatha nje ayisebenzi. Le indlela yokuya zehambo eYurophu usoloko ngololiwe, kwaye ukuhamba France akukho eyahlukileyo!
Nantsi imizekelo ixesha lokonga:
Amsterdam ku Paris
Uhambo Amsterdam eParis nga igcwaliswe malunga 3.5 iiyure. Le indlela yokuya yokuhamba kuyinto -High speed ngololiwe, kunye koololiwe rhoqo ngqo ukufika e Amsterdam Centraal Station imini yonke. Ezisuka eParis’ Charles de Gaulle Airport ukuya Schiphol moya Amsterdam kaThixo kuthatha malunga 4 iiyure xa amaxesha terminal ukulinda kuthathwa.
Qeqesha Ukusuka Amsterdam ku Paris Time – 3:26 h
Flight Time – 4:05 h
Time Kusindisa: 0:39 h
Ukusuka eLondon ukuya eParis
Unga ukuqabelisa olo hambo phakathi United Kingdom kunye neengqukuva isisiFrentshi nje phezu 2 iiyure. Le indlela yokuya of travel uloliwe obaleka ngesantya esiphezulu evela St. Pancras Station. Uya kufumana oololiwe rhoqo ngqo kokufika Paris’ Gare du Nord imini yonke. ezisuka London to Paris kuthatha malunga 4 iiyure xa amaxesha ukulinda-moya kuthathwa.
Qeqesha Ukusuka London to Paris Time – 2:16 h
Flight Time – 3:57 h
Time Kusindisa:1:41 h
Qeqesha travel eyona ndlela yokuthuthwa ukusuka kwisixeko omnye komnye kwi-Netherlands. Prices are relatively inexpensive as you can book a ticket through the Save A Train website ukusuka Amsterdam Rotterdam malunga 15 euro Amsterdam ukuya Hague (Den Haag Central) kuba emhlabeni 11 kowethu.
Ukusuka Amsterdam Dusseldorf ngu Train:
Kuthatha malunga 2 iiyure ukuhamba phakathi Amsterdam Dusseldorf ngololiwe. oololiwe rhoqo ngqo ufika e Amsterdam kwisitishi Central imini yonke. Iinqwelo-moya ukusuka Dusseldorf ukuya Schiphol Airport Amsterdam ukuba athathe phezu 3 iiyure.
Qeqesha Ukusuka Amsterdam Dusseldorf Time – 2:13 h
Flight Time – 3:10 h
Time Kusindisa: 0:57 h
INumeri andixoki! Ixesha yokonga athethe ngokwabo! The quickest mode of travel in Europe is by Train. Intloko phezu kwethu Gcina A website Qeqesha ukufumana amanani angcono, ngemizuzwana!
Ingaba ufuna kuzakulungisa post yethu blog kwi sayithi yakho, ungakwazi noba uthathe iifoto zethu kunye okubhaliweyo kwaye sinike nje ngetyala ngekhonkco kule post blog, okanye cofa apha: https://embed.ly/code?url=https://www.saveatrain.com/blog/quickest-mode-travel-europe/- (Skrolela phantsi kancinci ukuze ubone Code lungisela)
#airtravel #flying #mode of travel eurostar trainjourney train Travel uhambo ngololiwe